လုပ်နေကျအလုပ်ကို အကောင်းဆုံးလုပ်နေရုံနဲ ပြီးပြီလား?
by YECPP | Apr 28, 2017 | blog
တချိန်က Finland နိုင်ငံအခြေစိုက်ဖြစ်သည့် Nokia ဟာ ကမ္ဘာမှာ ပြိုင်စံရှား ဖုန်း Company တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ စျေးကွက်ဝေစုအရ မည်သည့် ဖုန်း Company မှ မယှဉ်နိုင်ခဲ.သလို Operation ပိုင်းမှာလည်း အလွန်ကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ 2007 မှာ iPhone 1st Generation ပွဲထုတ်ခဲ့ပြီး၊ Google မှ...
Facebook Marketing အတွက် ထိရောက်သော လုပ်ဆောင်ချက် ၉ ရပ်
by YECPP | Mar 24, 2017 | blog
Facebook Marketing အတွက် ထိရောက်သော လုပ်ဆောင်ချက် ၉ ရပ် 1. Hashtages နဲ့ တင်တဲ. post တွေဟာ facebook ပေါ်မှာ engagement နည်းစေပါတယ်။ 2. ည 10 နာရီနဲ့ 12 နာရီအတွင်း post တွေဟာ ပိုအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဒီအချိန်အတွင်းမှာ post လုပ်တဲ့သူနည်းပြီး facebook...